Siyaasi ka dalbaday Löfven in uu wax ka qabto dhibaatada ganga Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Zeqiraj Jahja(S) guddoomiyaha galbeedka xaafadda Hisingen Foto: Magnus Gotander
Siyaasi ka dalbaday Löfven in uu wax ka qabto dhibaatada ganga Göteborg
Publicerat torsdag 25 augusti 2016 kl 12.55
Kadib qaraxii isniintii ka dhacay Biskopsgården oo wiilka yar ku nafwaayey, gudoomiyaha galabeedka Hisinge oo Biskapsgården ka tirsan tahay ayaa hadda dowladda ka dalbanaya in amni xumada wax la qabto.
- Waxaa loo baahan yahay siyaasad qaran oo looga hortagayo rabshadaha, ayuu Jahja Zeqiraj oo xubin ka ah xisbiga socialdemokraterna ku qoray SVT opinion.
- Rajo weyn ayaa ka qabaa, waxay filayaa in ra'iisalwasaaraha dhawaan isku dayeyo in uu la kulmo hoggamiyaasha kale xisbiyada, waana arki doonaa waxii ka soo baxa kulankooda. Lakiin kuma filna wadahal keliya balse waa in qabsadaan waqti, ugu badnaan bil iyo labo gudaheed oo dhamaan xisbiyada xil-kaska ah ku keenaan xal amniga wax looga qaban karo, ayuu yeri Jahja Zeqiray oo ah gudoomiyaha galbeedka xaafadda Hisinge.
Waxuu dhawan qoral ku qoray bogga SVT opinion dhowr maalmood kadib markii wiil sideed jir ah lagu qaarejiyey bomb gacmeed daaqadda looga soo tuurey guri uu jiifay.
Jahja Zeqiraj ayaa ka dalbaday ra'iisalwasaaraha in uu la xaajoodo xisbiyada kale ee dalka si xal waaro loogu helo dhibaatada ka dhalatay qolyaha ganga ah ee isku dilaya xaafadaha qoqoban, dhibaatadas oo hadda mareysa heer carruur ku nafweydo.